Faaqidaadda: Deeqda Soomaalida
Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dadaalka ay Soomaalidu ugu gurmaneyso dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee Soomaaliya.
Geeska Afrika waxaa ku dhufatay abaar lagu tilmaamay tii ugu darneyd muddo 60 sano ah. Ilaa 11 milyan oo ruux ayaa lagu qiyaasay Bariga Afrika, inay abaartaasu saameysay, ayna qarka u saaran yihiin macluul.
Dalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu yahay meesha ugu daran ee ay abaartu ku dhufatay, iyadoo Qaramada Midoobay sheegtay in inka badan 3.7 milyan oo ruux oo Soomaali ah ay abaartu taabatay, tiradaasoo ah ku dhowaad 3 meelood meel, tirada dadweynaha Soomaaliya.
Qaramada Midoobay waxay codsatay $1.6 bilyan oo dollar oo ay ku bixiso gargaarka deg degga ee abaarta iyo macluusha, iyadoo Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee WFP uu bilaabay duulimaadyo gargaar lagu geynayo Soomaaliya, Bariga Itoobiya iyo Waqooyiga Kenya.
Ka sokow gurmadka beesha caalamka, Soomaalida joogta gudo iyo dibad waxay qaadeen gurmad lacag ururin ah oo aan la maleysan karin, si ay ugu gargaaraan dadkooda tabaaleysan ee ay abaaruhu ku dhufteen.
Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa gurmadka lacag ururinta ah ee Soomaalidu ay ku tilaabsatay, Waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijkeenna Faaqidaadda Todobaadka. Waxaana ka qeybgelaya:
Sheekh Axmed Miikaahiil oo ah guddoomiyaha guddiga taakulaynta ee jaaliyadda Soomaalida ee dalka Sacuudi Areebiya, oo jooga magaalada Magaalada Barakeysan ee Makka.
Cabdiraxmaan Cilmi Hilowle, oo ah guddoomiyaha guddi taakuleyn oo Soomaalidu ay ka dhisatay magaalada Qaahira.
Roodo Cabdullaahi Colaad oo ah ardayad wax ka barata Jaamacadda gobolka Ohio, kana mid ahayd arday Soomaaliyeed oo gobolkaasi ku sugan oo lacag ururin sameeyay.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isgana ka mid ah guddi hormuud u ahaa Soomaalida Nawaaxiga Washington DC oo iyagu sameeyay gurmad loogu gurmanayo dadka abaaruhu haystaan ee dalka Soomaaliya.